Izithwathwa zeqhwa 2020 | Vuselela imaski yakho yesizini ye-ski - ULLER
IZINSUKU EZIMNYAMA ZOLWESIHLANU: KUFIKELE KU-75% ISIPHAKU
Izibuko zeqhwa zango-2020 Vuselela imaski yakho yesizini ye-ski!
Izinsuku zeqhwa zisiculela! Ngaphandle kokungabaza, siyajabula kakhulu lapho sibona ukuthi iqhwa elingaka liwele ezindaweni zokungcebeleka okushibilika kuzo. Futhi akukho kungabaza: nabagibeli futhi abashushuluzi yibo ababamba ongezansi kakhulu lapho i- ski isizini,ukubekezela ukufika kwebhuloho elilandelayo noma ukubaleka ngempelasonto ukundiza nabantu osebenza nabo noma ungene i-freestyle, enza ukweqa namasu ngokweqile kakhulu.
Abathandi bemidlalo yeqhwa nokushushuluza futhi ukushibilika eqhweni Bahlale bekhetha iqhwa elisanda kuwa, kanti iqiniso ukuthi kuyahlonishwa ukuthi nasezinsukwini zasehlobo sibona iqhwa elincane eziteshini eziseduze. Futhi yingakho ukulungela isenzo kubaluleke kangaka! Futhi wena ... Ingabe unayo yonke imishini yakho yokushushuluza isilungile, kufaka phakathi i- izithwathwa zeqhwa zango-2020 kule sizini yokushushuluza?
Esinye sezesekeli zemidlalo ezibaluleke kakhulu okufanele uhlale uphatha ngaso lapho uvakashela izindawo ezineqhwa zithembekile izibuko zeqhwa. Akunandaba ukuthi ungumthandi we- ukushibilika eqhweni noma ukushushuluza, eyakho izithwathwa zeqhwa zango-2020 Azikwazi ukulahleka eqenjini lakho lezemidlalo.
Akunakwenzeka ukuqhuba imidlalo yeqhwa ngaphandle kokuthinta cishe "imilingo" lokho izibuko zeqhwa banikeza i- nabagibeli Futhi kunezizathu eziningi kakhulu zokuthi kungani kumele ngaso sonke isikhathi siphathe okwethu izibuko zeqhwa! Kungakhathalekile ukuthi isizini oya kuyo, isizini nohlobo lweqhwa eliwayo ... izithwathwa zeqhwa zango-2020 a kumele!
Ingabe usuyazazi izizathu zokuthi kungani kufanele uhlale ugqoke izibuko zakho noma imaski lapho uya ezindaweni ezineqhwa? Ngaphandle kokungabaza sekuyisikhathi sokuvuselela i- buso beqhwa futhi ulungiselele lokhu inkathi ski Funda futhi uthole izinzuzo zokugqoka okuhle kakhulu izibuko zeqhwa!
Kungani kufanele ngigqoke izibuko zeqhwa?
Imidlalo yeqhwa iyamangalisa. Nakanjani simangala ngokwengeziwe ukuthi abantu abanamakhono bangaba kanjani. nabagibeli kulezi zinsuku, kanye nezizukulwane ezintsha zabashushuluza abanikela ngakho konke ukuzijabulisa. Kepha okunye ukungalungi okuneqhwa ukuthi kungalimaza impilo yethu yamehlo uma singathathi izinyathelo ezifanele zokuqapha.
Abashushuluzi abasafufusa kanye nabaqalayo nabavakashi abavakashela ezindaweni zokungcebeleka kumele bavikele ukubona kwabo ngakho izibuko zeqhwa nezibuko zelanga. Imiphumela yeqhwa emehlweni nasekubukeni ingenzeka ngokushesha okukhulu futhi cishe ngaphandle kokukuqaphela, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi kunconywa ukuthi ugqoke ukuvikelwa kwamehlo lapho usendaweni eseqhweni kubandakanya lokho okubizwa ngokuthi "ubumpumputhe beqhwa".
Buyini ubumpumputhe beqhwa?
"Ubumpumputhe beqhwa" kungenye yokulimala kwamehlo okujwayeleke kakhulu ongakuthola ngenxa yokuchayeka ngokweqile emisebeni yelanga ezindaweni ezineqhwa. Igama lesayensi lalesi simo i-keratitis yelanga, yize yaziwa nangokuthi "i-photokeratitis", futhi iqukethe ukuvuvukala kwendawo engaphandle esobala yeso ebizwa ngokuthi i-cornea.
Kufanele ngaso sonke isikhathi sithwale okwethu izibuko zeqhwa kuqinisekisiwe ukugwema izimpawu zokungaboni kweqhwa, okungenzeka ngemuva kwamahora ayisithupha kuya kwayi-6 ngemuva kokuvezwa ngenxa yokukhanya okweqile nemisebe, futhi imvamisa amehlo womabili ayathinteka ukulimala. Izimpawu ezijwayelekile zifaka ukwehla kokubona okubonakalayo, ukuzwela ekukhanyeni, amehlo abomvu, ukuzwa okunamandla, ukudwengula nobuhlungu obukhulu.
Ingabe kufanele ngibuke amehlo ami eqhweni?
Kumele sinakekele amehlo ethu emiphumeleni ekhanyayo yeqhwa. Kubalulekile ukuthi unake ukuthi iqhwa lingaba yingozi kanjani embonweni wethu nasekuqineni kwe-ocular njengokuqapha, futhi futhi siqonde ukubaluleka kokugqoka njalo izibuko zeqhwaukunakekela amehlo ethu.
Izikhathi zamaholide okushushuluza phakathi nabagibeli nozakwethu, yizikhathi ezingenakulibaleka okungafanele siphuthelwe kuzo uma sinethuba lokuzijabulela, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi imisebenzi yobungozi nokuzidela kufanele ithathwe ngokungathi sína kakhulu futhi ithathe zonke izindlela zokuvimbela esingazenza buso beqhwa.
Kungani izindawo ezineqhwa zingaba yingozi kumbono wethu?
Izindawo ezinesithwathwa zimbi kakhulu emehlweni ngenxa yalezi zizathu ezimbili eziyinhloko:
Ubuwazi ukuthi iqhwa likhombisa imisebe efinyelela kuma-80% yemisebe ye-ultraviolet? Lokhu kusho ukuthi ibukeka ngokuphindwe kane kunamanzi, okuyisizathu futhi sokunakekela umbono wethu.
Ubuwazi ukuthi ukuphakama kwezindawo ezineqhwa kusithinta kakhulu? Umphumela olimazayo welanga uyanda ezindaweni ezineqhwa kusukela inani lemisebe ye-ultraviolet lenyuka ngo-10% kuwo wonke ama-1000m wokuphakama, njengomphumela wokwehla kwesihlungi sasemkhathini.
Imisebe yelanga isimboza nsuku zonke, kufaka phakathi nezinsuku ezinamafu kakhulu, nezindawo ezineqhwa azikhethi. Lezi zindawo, empeleni, zingenye yezindawo zomhlaba lapho ukunakekelwa okukhulu nokuvikelwa okufanele kuthathwe khona ukunakekelwa okukhulu. Izici nezimo zalo kuthuthukisa izinga lezimo ezibangelwa imisebe yelanga eqhweni. Kufanele ngaso sonke isikhathi sigqoke okuhle izithwathwa zeqhwa zango-2020 Abavikeli banakekela kahle ukubona kwethu futhi baqinisekise umbono omuhle kakhulu wezemvelo usebenza, ukugwema ukuzibophezela kunoma yiluphi uhlobo lomonakalo omkhulu.
Ngaphezu kwalokho okwaziwa njenge-keratitis yelanga, kubalulekile ukugqoka njalo izibuko zeqhwa ukusivikela kwezinye izimo njengokulimala kwe-retina, ukweqisa uhlobo lwamehlo kanye ukungezwani okubukwayo. Konke lokhu sikugwema ngokuhle izibuko zeqhwa, ikhwalithi futhi iqinisekisiwe evikela umbono wethu futhi isisize ukuba sibe ngcono nsuku zonke nabagibeli.
Yiziphi izibuko zeqhwa ezihamba phambili zango-2020?
Amagobolondo eqhwa amahle kakhulu yizibuko zekhwalithi ezilingana nezidingo zethu njengabashushuluzi bokushibilika eqhweni noma kubashushi beqhwa, futhi zisivikele elangeni nasemikhathini njengoba kufanele.
Okuhle kakhulu Izibuko ze-Ski:
Kumele bahlonishwe futhi bahambisane namazinga e-ISO, bakhombise ukuqinisekiswa kwabo yi-CE ngesiqinisekiso se-European Union.
Kumele izithwathwa zeqhwa zango-2020 ihlukaniswe ukusisiza ukuthi sigweme ukucabanga okucasulayo.
Kufanele babe namalensi kazibuthe ashintshanayo ukukhetha isigaba esihle kakhulu sengilazi ngokuya ngesenzakalo.
Baqinisekisa ukuvikeleka elangeni okungenani kube ngama-90%; ngaphansi kwalokho kuzoba kuncane.
Kumele babe nokuvikelwa kwe-UV-400, okungukuthi, emisebeni yelanga ye-UVA ne-UVB.
Kufanele zenziwe ngama-polycarbonate abunjiwe, njenge-thermoplastic polyurethane, ukuze kube nokuguquguquka okungcono nokubambelela.
Kufanele babe izibuko zeqhwa ukumelana, ukukhanya, ukhululekile futhi ngaphezu kwakho konke okulungisekayo ukuze bafeze umsebenzi wabo kahle.
Ser Izibuko zeSki ngentambo yokulungisa i-anti-slip.
Kufanele babe izibuko zeqhwa Ngohlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi oluzisebenzelayo, ukuze ukusakazwa komoya kuqhubeke futhi kuqinisekise ukubonakala kwakho.
Banokukodwa kokucacisiwe kwabo isendlalelo esiphindwe kabili sokulwa nenkungu (i-antifog) ngakho-ke abenzi inkungu lapho besebenzisa.
AMAKHASI E-SNOW 2020: Amathrendi
Izitayela ze izithwathwa zeqhwa zango-2020 zisuselwa kuzici ezi-4: umbala, usayizi, ukuguquguquka nohlaka. Kulo nyaka umkhuba ukugqoka imibala ekhanyayo okuthi ngaphezu kwabavikeli bakwenze ubukeke ungakholeki. Izitayela ze izibuko zeqhwa2020 / 2021Yilezi:
Izibuko zeqhwa ezinemibala egqamile
Iziqhwa zeqhwa ezinezimele ezingabonakali
Ujijane weqhwa elijiyile
Izitebhisi zeqhwa zesitayela
Kodwa-ke, umkhuba omkhulu kakhulu kulo nyaka ubuchwepheshe obusemuva kwe- izithwathwa zeqhwa zango-2020: I-High Tech Performance Optics X-POLAR iyindlela yakamuva ka-2020/2021.
Ukucabanga ngokuthenga izibuko ezintsha zeqhwa kungavusa imizwa ethile, kepha uma ucace bha ngezincomo ezidingekayo okufanele uzilandele ukufeza izinhloso zakho zisebenza, khona-ke konke kuzoba lula kakhulu kuwe.
Faka imali kwezobuchwepheshe.
Khombisa isitayela sakho nobuntu bakho.
Funa ukwaziswa okuhle kakhulu.
Khetha izibuko zeqhwa iqinisekiswe ngokuvikelwa kwelanga nge-UV400.
Khetha Izibuko zeSki nezimo ezinamalensi ashintshanayo: ngenkungu, imvula, ama-blizzards kanye ne- ski isizini 2020.
Uma ucabanga ngalezi zici lapho uthenga izesekeli zemidlalo, ngeke kube khona iphutha, kepha ukukhetha okuhle kakhulu izithwathwa zeqhwa zango-2020.
Kungaba yihlobo, kungaba ebusika ... abagibeli kulokho abakubona iqhwa ngokuqinisekile bayoba nabashushuluzi nabashibilika eqhweni abakulungele ukungcolisa lokhu ski isizini. Futhi uchwepheshe kakhulu, wazi kahle kakhulu: ukuphepha kuza kuqala! Ngakho-ke unganqikazi futhi uhlale uphethe okuhle kwakho izithwathwa zeqhwa zango-2020 Sizokubona ku-adventure!
Ukugqoka izimaski ezinhle zokushushuluza kubalulekile lapho uzijwayeza imidlalo eyingozi eqhweni. Ngabe ubona sengathi ukulungele ukunqoba ubungozi bemvelo lapho ushibilika eqhweni? Thola ama-5